Dowladda Soomaaliya oo Sheegtay in Al-shabaab uu u furan-yahay Al-baabka wada-Hadalka – Radio Daljir
Dowladda Soomaaliya oo Sheegtay in Al-shabaab uu u furan-yahay Al-baabka wada-Hadalka
Juunyo 6, 2015 3:53 b 0
Sabti, Juun 06, 2015 (Daljir) — Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Calaamiga ee Xukuumadda Federalka Somalia, C/raxmaan Sheekh Yuusuf Cali Cante ayaa sheegay inay albaabadda u furan yihiin wada hadalo lala yeesho Alshabaab, gaar ahaan waxa u uugu yeeray kuwa rajadda laga qabo inay ku soo biiraan bulshadoda.
Wasiirka ayaa hadalkaasi ka sheegay Shirweynaha Wada-xaajoodka ee Dhaqaalaha Adduunka ee Afrika (WEF-Africa) oo ka socda magaalladda Cape Town ee dalka Koonfurta Afrika.
“Waxaan wada-hadal kula jiraan kuwa ay Hadafka Waddaniyadda Somalia ku dheer tahay ee ka tirsan Alshabaab, ee ma aha kuwa aaminsan Aragtida fog ee Xagjirnimadda Caalamka” waa sida u uhadalka u yiri Wasiir Caynta.
Wasiirka waxa uu tilmaamay inay Dowladda Federalka Somalia ku guuleysatay sidii loo yareyn lahaa goobaha ay Alshabaab ka maamulaan gudaha dalka Somalia, oo ay horey u haysteen 60%, wuxuuna intaasi ku daray inay inta badan Alshabaab isaga tageen Dagaalkii.
Waxa kaloo uu hadalkiisa ku xusay inay Dowladda Federalka sii wadayaan dagaalka ay kula jiraan Dagaalamayaasha Alshabaab, si ay u gaarsiiyaan farriin la xiriira inaan la oggolaan karin waxa uu ugu yeeray Kooxaha Argagixisadda.
Wafdi ka socda Federaalka Itoobiya oo Jig-jiga u jooga xal-u helidda Colaado ka jira Xadka Somalia iyo Itoobiya
Uganda oo weydiisatay Talyaaniga in ay Ciidamo u Dhisto Soomaaliya